Wararka Koonfurta Soomaaliya ee Toddobaadkan
DKG oo fariisin Ciidan ka sameyn doona Magaalada Aw-dheegle
Cayayanaan Fara Ba’an ku haya Deegaano ka tirsan G/Sh/ Hoose
Dammeeraha Muqdisho oo Daroogo la siiyo
Dammeeraha oo ka mid ah Gadiidka ay soomalidu si’aad ah ugu Manaafacaadaan Qeyb Libaaxna ka qaata Adeega guud ee Bulshada ayey kuwa muqdisho ay u daboolaan baahida Bulshada siyaabo kala duwan gaar ahaan Dadka dan yarta ah Sida Qaadida Alaabooyinka kala duwan iyo Biyaha.
Inta badan Dadka ku nool Magaalada Muqdisho 70% waxey dano uga xiran yihiin Dammeeraha ayagoo ugu Manaafaacadda Siyaabo kala gadisan kuwaasoo kala ah: kuwo ah Milkilayaasha Dammeeraha oo lagu shaqeeyo Daqli ay ku daboolaan Baahida Qoysaskoodana uu uga soo xaroodo, iyo kuwo Shaqaale ka ah oo nolol maalmeedkooda ka raadsada kana qaata Joornaati iyo Dadweynaha kale ee ay Biyaha u geeyaan maadaama aysan awood u laheyn iney Ceelasha Muqdisho oo ah kuwo ay leeyihiin Shaqsidaan Gaar ah ay Biyo kasoo gashadaan. Ayaa waxaa jirta in Dammeeraha oo ah Xayawaan Nafley ah oo hadii ay hawshu ka badato Daala oo Tabar yareeya in Dhalinyarada wadayaasha ka ah ay siiyaan DAROOGO si uusan u daalin Dammeerku.
Taasoo Dhibaato aan la soo koobi Karin u geysta Dammeeraha Daroogooyinkaas ay Wax-magaratadu Siiyaan Daroogooyinka ay siiyaan Wax-magaratadu ayaa isugu jira Kiniiniyaal iyo waxyaabo kale oo Qasan dabadeedna ay ugu daraan Biyaha uu Cabayo Dammeerku Tasoo keenta inuu ka Go’o Biyaha iyo Baadka (Cawska) iwm inta ay Daroogadu ku jirto jirka Dammeerka.
Milkilyaasha Dammeeraha ayaa Walaac ka muujiyey Umuurtaan . Waxeyna sheegeen Qaar ka mid Milkillayaashu ay arintaani ku keentey in ay ku Aamini waayaan Shaqaale oo ay Gacantooda ku wataan Dammeerahooda si ay uga Badbaadiyaan wax-magaratada aan aqoonta u laheyn Qiimaha iyo Waxtarka uu leeyahay balse halkii looga baahnaa iney Xanaaneeyaan ay siiyaan Daroogo. Inta badan Waddankeena Soomaaliya Magaalooyinkiisa Waaweyn hadii aad u kuur gasho Dhalinyaradda Wadayaasha ka ah Dammeeraha tobankii (10) Dammeer ee ay Indhahaagu qabtaan waxaad ku arkeysaa Labo (2) ama Saddex (3) aad ka Naxdo Darxumadda ka muuqata Xayawaankaasi.
Waxaa jirta in wax-magaratada ku shaqeeya Dameeraha aad arkeysid ayagoo Dusha ka Saaran Gaari uu jiidayo Dameerku hanoqoto mid Biyo wada ama mid Alaab sidee ayna Ulo waaweyn Dhabarka kala dhacayaan (ku garaacayaan) si Naxariis daro ka dibna ay Ushaasi Dhaawac u geysato Dhabarka Dammeerka ama Sinnaha Dammeerka, Waxaase taa kasii daran markii dammeerku dhaawac gaaro Usha ay la dhaceen awgeed ma garowsadaan Cuqubadda ay ka galayaan Xayawaankaan Nafleyda ah ee waxaad Arkeysaa meeshii Dhaawacu ka gaarey Dammeerka ee Diirantey (Muruxdey) ayagoo Ul uga Jukeynaya ama uga Mudaya si meesha Boogta ah ee Dhaawacu gaarey U Danqato si Dammeerku u Ordo una socdo Socod Xad dhaaf ah.
Isku soo duuduuboo sidii Sharcigii iyo kala Dambeyntii ay faraha uga baxdey ayey ugu Sahlanaatey in wax Magarataddu Sameeyaan wixii ay Maskaxdooda ka Maagaan
Warka naga soo gaaraya gobolka shabeelada hoose ayaa waxey sheegayaan in magaalooyinka Tawakal Awdheegle iyo Bariire dadka ku nooli ay dhibaato ku qabaan Cayayaano yar yar oo markii hore lagu arkey beeraha balse markii dambe soo galey magaalooyinkaas.
Sida warar xog ogaal ihi sheegayaan cayayaankaan ayaa marba marka ka dambeys ay soo badanayan asagoo u socod si raxan raxan ah.
Dadka ku nool Gobalka shabeelada hoose ayaa ah 80% dad Beeroley dadka beeraleyda ah ayaa sheegaya in marki horey ay cayayaankaan ku arkeen beeraha kaasoo dhibaato uga geysan jirey Dalaga ay beertaan ayna kula dagaalami jireen Sunta cayayaanka balse hadeer midkaani uu yahay cayayaan aysan dili Karin sunta ay heystaan Tiradiisuna ay xad dhaaf tahay.
Waxeysa xaaladu sii murugtey markii uu soo galey magaalooyinkii taasoo uu dhib ba’an u geysto dadka markii ay jiiftaan asagoo dhagaha, Sanka iyo Indhaha ka gala ugu dambeyntiina waxey ku kaliftey dadka dagan deegaanadaas in aysan karsan CASHO.	marna aan la xiriirey dad dagan deegaanadaas oo aan wax ka weydiiyey sababta ku kaliftay ineysan Casho kartan waxey ii sheegeen in ay u taag la’yihiin Cayayaankaan oo uu uga dhaco Biyaha Cuntada iyo wixii la mid ah taasna ay ku kaliftey ineysan casho karsan.
Si kastaba ha ahaatee dadyowga ku dhaqan Deegamadaasi waxey Xusul Duub ugu jiraan sidii ay uga hortagi lahaayeen Cayayaankaas Qatarta ku haya Noloshooda.
Nabad galyada Deegaanadaasi ayaa aheyd mid liidata Asbuucyadii la soo dhaafey waxeyna Codsi Cabasho ah u Dirsadeen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed (CXDS) ee hoosta taga ama ka amar qaada (DKM) ah oo Fariisimo ku leh magaalooyin ka tirsan G/sh/hoose, Inta badan Gobolka Shabeellada hoose waxaa Gacanta ku haya Dowladda ku meel gaarka ah inkastoo ay jiraan Fariisimo ay Joogaan Maleeshiyooyin aan Cidna ka amar qaadan.
Masuul u Hadley Dowlada ku meel gaarka ah ayaa sheegay in ay si deg deg uga jawaabi doonaan Codsiga Cabashada ah ee uga yimid Dadka ku nool Magaalooyinka Aw-dheegle, Bariire ,iyo Tawakal Ayagoo fariisin Ciidan ka sameyn doona Magaalada Aw-dheegle ayna Roondo ku sameyn doonaan wadooyin isku xira magaalooyinkaas iyo guud ahaanba gobalka shabeellada hoose ayna ka sifeyn doonaan Burcadda Dhibaatada ku heysa Gobolkaasi.
Ali Mohamed Haji (Calideeq)
Dab Qabsadey Dekadda Ceel-macaan
wuxuu si lama filaan ah dab u qabsadey Dekadda Dabiicigaa ee Ceel-macaan Dabkaan oo.. GUJI..
Dagaal ka Dhacay G/Shabeelada Hoose
Dagaalkaas oo la xiriirey dhul-beereed waxaa ku dhintay..... GUJI..
Shil Baabuur oo kadhacay Tuulada Qalimoow
Baabuurkaas oo ka baxay Muqdisho warbixintii uu kasoo diray Calideeq..... GUJI.. Feb 17
»»Itoobiya: Qaansada maslaxadeena & Cawodgeenaba!
»»Qiimaha dhulka iyo qaddarin la’aanta Soomaalida
»»CIIDANKII USAAMA BINU SAYD [siiro 81aad]
Xaley Abaarihii 7:00pm fiidnimo wuxuu si lama filaan ah dab u qabsadey Dekadda Dabiicigaa ee Ceel-macaan Dabkaan oo.. GUJI..
»»WAA MAXEY UJEEDADA UU (XAGAR YARE) KA LEEYAH
»»CAALAMKA NINKII UGU HOREEYAY EE LOOXUKUMO QARAXII U.S.A
Laba Sarkaal oo Ka Tirsan Ciidanka Cirka Itoobiya oo Baxsaday: Wararkii Radio xoriyo ee maanta.... GUJI
»» SOOYAALKA TAARIIKHEED EEDAHSOON IYO DIRIRTA TOGAN
»» Xuskii UFO iyo sanad guuradii 21aad
BILICD SOOMAALIYA..... GUJI